Umaka: iot | Martech Zone
Esontweni noma ngaphezulu edlule ngacelwa ukuthi ngikhulume emcimbini wesifunda ku-Intanethi Yezinto. Njengokubamba iqhaza kwe-Dell Luminaries podcast, ngithole ithoni yokuchayeka kwikhompyutha ye-Edge kanye nobuchwepheshe obusha obusivele busenzeka. Kodwa-ke, uma usesha amathuba wokumaketha maqondana ne-IoT, ngobuqotho azikho izingxoxo eziningi online. Eqinisweni, ngidumele ngoba i-IoT izoguqula ubudlelwano phakathi
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 27, i-2018 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 27, i-2018 Douglas Karr
Inani lamadivayisi axhumeke kwi-Intanethi ekhaya nasehhovisi lami liyaqhubeka nokukhula njalo ngenyanga eyodwa. Zonke izinto esinazo njengamanje zinezinhloso ezisobala - njengokulawula ukukhanya, imiyalo yezwi, nama-thermostat ahlelwe kahle. Kodwa-ke, ukuqhubeka kwe-miniaturisation kwezobuchwepheshe nokuxhuma kwabo kuletha ukuphazamiseka kwebhizinisi njengoba singakaze sikubone ngaphambili. Muva nje, ngithunyelwe ikhophi ye-Intanethi Yezinto: Digitize noma iDie: Guqula inhlangano yakho. Yamukela
Sisanda kwabelana ngezibonelo ezithile zokuthi i-Enterprise IoT (i-Intanethi Yezinto) ingaba nomthelela omkhulu kangakanani ekuthengisweni kwesitolo. Indodana yami ibihlanganyela nami nje izindaba ezindabeni zokuthengisa ezikhombe izibalo ezingezinhle maqondana nokuvulwa nokuvalwa kwezitolo. Ngenkathi igebe lokuvalwa liqhubeka nokukhula, kubalulekile ukuqaphela ukuthi leli lizwe liyaqhubeka nokuvula izindawo zokuthengisa ezithe xaxa. Ngisho ne-Amazon, okuthiwa okudayisa
NgoLwesine, Novemba 16, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ababolekisi bahlehla ngemali yezimboni ezivele zigula. IBloomberg ibikezela ukuthi iRetail Apocolypse kungenzeka isheshe isifikele. Umkhakha wokuthengisa ulambele izinto ezintsha, futhi i-Intanethi Yezinto inganikeza umfutho odingekayo. Eqinisweni, ama-72% wabathengisi njengamanje asebenza kumaphrojekthi we-Enterprise Internet of Things (EIoT). Ingxenye yabo bonke abathengisi isivele ifaka ubuchwepheshe bokusondela ekumaketheni kwabo. Yini i-EIoT? Emabhizinisini anamuhla, kuyanda